Ayikwazi ukufumana iimpawu-ngcaciso zefayile ze-'https://www.korpus.cz/shibboleth'
Kusenokwenzeka yingxaki yolungiselelo kumboneleli wenkonzo okanye umboneleli wesazisi.
Ukuba ngaba ungumsebenzisi ofumene le mpazamo emva kokulandela ilinki kwisayithi, ufanele uchaze le mpazamo kumnini walo sayithi.
Ukuba ungumvelisi osebenzisa isisombululo sokusayina ungene kanye, unengxaki nolungiselelo lwe-metadata. Qinisekisa ukuba i-metadata ilungiselelwe ngokuchanekileyo kuzo zombini umbonelei wesazisi nomboneleli wenkonzo.
Cacisa ukuba wenze ntoni xa bekusenzeka le mpazamo...
Thumela ingxelo yempazamo